HomeWararka Maanta SomaliskaMaxaad kala Socotaa Sharciga Cusub ee Barlamaanka Ansixiyay ee Corona la xiriira
2 weeks ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 1
Barlamaanka Sweden ayaa maanta Ansixiyay Sharci Cusub oo Corona la xiriiro Ujeeddada sharciga kumeelgaarka ah ayaa ah in dowladda iyo maamulada kale la siiyo suurtagal weyn oo ay ku dhaqan galiso tallaabooyinka xakameynta cudurka. Sida sharcigu qabo, dowladda ayaa xaddidi karta saacadaha shaqada ama tirada dadka qol ama goob joogi kara. Xaaladaha aadka u daran, ganacsiyada waa la xiri karaa gebi ahaanba.
Hawlaha sharcigu daboolayo waa:
Tiyaatarka, shineemooyinka, ciyaaraha kubada cagta, isu imaatinka bulshada iyo dhacdooyinka kale ee bulshada.
Jimicsiyada, goobaha kaamamka, jardiinooyinka lagu ciyaaro, matxafyada, meelaha madadaalada ama dhaqamada.
Dukaamo, suuqyo iyo wixii lamid ah.
Gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka hawada ee Dalka gudihiisa ah.
Hoolalka, sida qolalka lagu ciyaaro iyo meelaha sida gaarka ah loogu kulmo.
Goobaha bulshada, sida jardiinooyinka iyo meelaha lagu dabaasho.
Dawladdu waxay kaloo dhaqan gelin kartaa mamnuucista ku soo aruurisa cabir ahaan meel cayiman.
Sharcigu wuxuu siinayaa golayaasha gobollada iyo degmooyinku inay qaataan go’aannada maxalliga ah ee xadidaya faafitaanka cudurka.
Ciddii ku xad gudubta mamnuucista ku sii joogitaanka meel fagaare ah waa la ganaaxi karaa.
Go’aanka dowlada ee ah in la mamnuuco ama la xiro waxay kuxirantahay dib u eegista baarlamaanka hal todobaad gudihiis kadib go’aanka.
Soo jeedinta dowladda ayaa qeexday in sharciga la dhaqangelin doono 15-ka Maarso, laakiin dhaliilo badan kadib markii dowladda lagu eedeeyay inay ka gaabisay, waxay u soo gudbisay soo jeedinteeda si deg deg ah, si ay u dhaqan gasho 10-ka bisha Janaayo oo ay ku egtahay maalinta ugu dambeysa ee Sebtember 2021.
Waad ku mahadsantihiin tebinta aad noosoo tebisaan wararka.